Miditra Amin’ny Dingana Farany ny Hazakazaka Ifaninanana Fatratra ho Filoham-Pirenena Gambiana · Global Voices teny Malagasy
Miditra Amin'ny Dingana Farany ny Hazakazaka Ifaninanana Fatratra ho Filoham-Pirenena Gambiana
Voadika ny 02 Desambra 2016 4:22 GMT
Niteny ny filoha Gambiana Yahya Jammeh izay efa teo amin'ny fahefana hatramin'ny taona 1994 fa mihevitra izy fa Andriamanitra irery ihany no afa-manaisotra azy hiala eo amin'ny fahefana. Saripikan'ny Firenena Mikambana avy amin'i Erin Siegal. Miasa avy amin'ny lisansa Creative Commons BY-NC-ND 2.0.
Niditra tamin'ny fitetezan-tany amin'ny andro faramparany ho amin'ny fifidianana nizotra tamin'ny 1 desambra ireo kandidà ho filoham-pirenena tamin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra [28 novambra]. Roa ny mpifaninana amin'ny filoha Yahya Jammeh mitondra amin'izao fotoana izao: Mama Kandeh avy ao amin'ny Kongresy demaokratikan'i Gambia (GDC), sy i Adama Barrow, kandidà mahaleotena iray tohanan'ny vondron'antoko politika mahatratra hatramin'ny fito.
Mihazakazaka ao amin'ny sehatry ny fanohizana ny fampandrosoana ara-piarahamonina sy toekarena, fandriampahalemana sy ny fahamarinan-toerana i Jammeh izay eo am-pikatsahana ny fehim-potoam-piasana fahadiminy. Nampanantena izy ny hanitatra sy hanatsara ny fitsaboanan ny fanabeazana kary tafiditra amin'izany ny hanaovana ho maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny oniversite. Navoitran'i Jammeh ny mahazava-dehibe ny ny fanentanana sy fifidianana milamina sy mirindra. Nandrisika ny olona hiroso ao amin'ny fifidianana amin'ny fomba milamina izy.
Etsy ankilan'izany anefa ny kandidàn'ny fanoherana niampanga an'i Jammeh ho manapotika ny toekarena sy nametraka diam-panitsakitsahana ny zon'olombelona ho anisan'ny ratsy indrindra eto Afrika. Nampanantena izy ireo ny hametraka governemanta andraisan'ny vondron'olona maro kokoa sy tsy mitongilana raha voafidy.
Mifarana ny talata ny fanentanana, heverina ho “andro tsy iasana fampangatsiatsiahana” miaraka amin'ny androm-pifidianana ny 2 Novambra.
Azo antenaina ho anisan'ny ifananana indrindra hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1994 nitondra an'i Jammeho ho eo amin'ny fahefana ity fifidianana volana desambra ity. Nilaza ny Vondrona Eoropeana fa nolavin'ny manampahefana gambiana ny fangatahan'izy ireo hanara-maso ny fifidianana, saingy nilaza ny vondrona ara-paritra toy ny Vondrona Afrikana sy ny CEDEAO fa hanara-maso ny fifidianana ry zareo. Tamin'ny fifidianana ho filohampirenena farany ny CEDEAO nitsipaka ny fandefasana mpanaramaso tamin'ny filazana fa tsy halalaka sy ho marina ny fifidianana.
(Fanavaozam-baovao 29 Novambra 2016: Itsy nanara-maso ny fifidianana notontosaina tao Gambia ihany ny CEDEAO tamin'ny farany. Araka ny loharanom-baovao ao an-toerana, nolazain'ny filohan'ny vaomieran'ny fifidianana fa tsy tonga ara-potoana ny fangatahan'ny vondrona hanao fanaraha-maso.)
Nandritra ny ankatoky ny fifidianana, nisy ny fihetsiketsehana ara-politika manohitra ny governemanta [mg] indrindra fa ao amin'ny faritra lehibe ao Banjul. Ao anatin'ny hetsika iray mitaky fanitsiana ny lalam-pifidianana sy ny fialan'ny filoha Jammeh ireo fihetsiketseham-panoherana ireo. Notsenain'ny bala tena izy [mg] avy amin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tsy afaka handray anjara amin'ity fifidianana ity i Ousainou Darboe, mpitarika ny antoko politika mpanohitra lehibe indrindra satria meloka tamin'ny fandraisany anjara tamin'ireo fihetsiketsehana ireo, miaraka amin'ireo olona lehibe 18 hafa ao amin'ny antokony izy.
Mpitarika ny fanoherana sy ireo mpanohana azy nanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitr'i Gambia ao Banjul. Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny antokon'ny fanoherana (UDP).
Tamin'ny fiandohan'ny volana novambra, namoaka tatitra ny Human Rights Watch, “More Fear Than Fair: Gambia’s 2016 Presidential Election,” [Tahotra no betsaka kokoa noho ny Marina amin'ny fifidianana ho filoham-pirenen'i Gambia 2016] manoritsoritra ny fangejan'ny governemanta ireo antoko politikan'ny fanoherana tao anatin'ny volana maromaro nialoha ny fifidianana.
Nasehon'ny tatitra ny fomba nanenjehan'ny filoha Jammeh ireo antoko mpanohitra, fanjakazakana amin'ny fampitam-baovaom-panjakana, ary fampiasana ny fitaovana sy volam-panjakana hanaovana fanentanana. Nametraka izany fa mihoatra ny 90 ireo mpikatroka avy ao amin'ny fanoherana no nosamborina tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsiketsehana milamina, ary 30 no voaheloka higadra telo taona raha roa ny mpikatroka avy ao amin'ny mpanohitra no maty nandritra ny fitazonana azy ireo an-tranomaizina.
Tamin'ny fanadihadiana isan-taona ny firenen-drehetra niresahana an'i Gambia tamin'ny taona 2014 ny Amnesty International, fikambanana iray mpandala ny zon'olombelona no nilaza: “Hatramin'ny namoahana ny fanadihadiana isan-taona nilazana an'i Gambia tamin'ny taona 2010 no niharatsy toerana ny zon'olombelona. Manohy amin'ny fanampenam-bava ny fahalalahana hiteny sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hafa tsy voasazy ny governemanta.”
Ankoatra ny ahiahy amin'ny fahadiovan'ny fifidianana, niezaka mafy tamin'ny fanohanana ao amin'ny media sosialy ny kandidà sy ireo mpanohana azy hahazoana vato. Namoaka ity lahatsary eto ambany ity miaraka amin'ny hafatra ao aminy i Zainab Jammeh, vadin'ny filoha izay miara-manentana amin'ny vadiny:
The masses have clearly spoken “Vote President Jammeh for continuous development and Prosperity”.
Miarahaba ny ezaky ny Filoha Hajaina sady kandidàn'ny antoko APRC amin(kafaliana ny Gambiana taorian'ny fitetezan-tany naharitra herinandro tany ambanivohitr'i Gambia ao anatin'izao fanentanana filoham-pirenena 2016 izao.
Naneho izany rehetra izany ny fihetsiketseham-pifaliana ho fanohanana sy fanavaozana indray ny fitarihana tsy azo ihodiviran'ny filoha Jammeh ho an'ny Gambiana.
Efa nilaza mazava ireo vahoaka marobe nivory “Fidio ny filoha Jammeh hitohizan'ny fampandrosoana sy ny fanambinana”.
Ary tamin'izany fotoana izany i Bakary Badjie, mpanohana ny vondrom-panoherana nanoratra tao amin'ny Facebook:
Because Jammeh didn't wait for Allah to come hold his hand to presidency, Gambians too shouldn't fall for those unfounded fatalist talk “Allah put him there and will remove him when his time is up”.. Go Vote Coalition because this is that time. You the Voters can make it happened cuz Allah works through people..
Several people on the group confirm the coalition's caravan and people welcoming them was unprecedented. Now Gambia translate this into #Votefor #AdamaBarrow#1Demberr
Satria tsy niandry an'i Allah i Jammeh tamin'ny fandraisany ny fitantanana ny fiadidiana ny filoha, dia tsy tokony ho latsaka ao anatin'ny resaka manaiky lembenana “Allah no nametraka azy eo ka hanaisotra azy eo amin'ny fotoany”ihany koa ny Gambiana. Mandehana mifidy satria izao no fotoana. Afa-manao izany ianao mpifidy satria miasa amin'ny alalan'ny vahoaka i Allah.
Efa nanamafy ny olona maro fa tsy mbola nisy toy izany hatramin'izany ny valalamanjohin'ny fiara nitondra ireo mpiaradia sy ny vahoaka nitsena azy ireo. Ankehitriny avadiho hifidianana an'i Adama Barrow amin'ny 1 desambra izany ry Gambia.
Vao haingana ny filoha Jammeh no nilaza fa Andriamanitra (Allah) irery ihany no afa-manaisotra azy eo amin'ny fahefana satria izy ihany no nametraka azy teo. notoherin'ny filoha Jammeh ny fetran'ny fehim-potoan'ny filoha. Mihevitra izy fa Andriamanitra no mametra ny fehim-potoam-piasana ary raha sitrak'Andriamanitra dia mety ho afa-mitondra an'i Gambia ao anatin'ny “iray miliara taona” izy. I Gambia no iray amin'ny firenena roa ao Afrika Andrefana manana filoha miasa ivelan'ny fehim-potoam-piasany.
Namoaka ity lahatsary manaraka ity ny ao amin'ny GDC raha tonga tao an-tanànakelin'i Sintet ao amin'ny morontsiraka andrefana ny kandidàn-dry zareo: